चस्मा लगाउने मानिसलाई यसकारण कम सर्छ कोरोना — Sanchar Kendra
जबकि यसअघिको अर्को अध्ययनले त्यही भेगमा यही उमेर समूहका मानिसमा आँखाको यो कमजोरी ३० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा फेला परेको थियो। यति धेरै जनसंख्याले चस्मा लगाउने भए पनि कोरोना संक्रमितमध्ये चस्मा लगाउनेहरू त निकै कम छन्। यसले वैज्ञानिकहरूमा एउटा आशंका भयोः कतै चस्मा लगाएका कारण पनि मानिसहरू संक्रमित हुनबाट जोगिएका त होइनन्?
डा. मारागाकिसका अनुसार पछि यो कुराको कुनै तुक नहुन पनि सक्छ। अरू नै कारणले चस्मा लगाउनेहरू संक्रमित नभएका हुन पनि सक्छन्। उदाहरणका निम्ति चस्मा लगाउने बढीजसो स्वाभाविक रूपले अलि बुढेसकाल लागेका हुन सक्छन्। महामारी फैलिएको छ भन्ने सुनेपछि बढी सावधानी अपनाउँदै धेरै घरैमा बसेका हुन सक्छन्। र संक्रमणबाट जोगिएका होलान्!
त्यसैगरी अर्को कारण चस्मा किन्न सक्नेहरू स्वयंलाई सुरक्षित राख्न भिडभाड भएको ठाउँमा जान्नँ भनेर जोगाउन सक्ने अवस्थामा पनि हुन सक्छन्। यी सबै अध्ययनकै क्रममा छन्।
‘यो अत्यन्तै रोचक र थप बुझ्नका निम्ति उत्सुकता जगाउने विषय हो,’ डा. स्टेनम्यान भन्छन्। यो अध्ययनले चस्मा नलगाउने धेरै मानिसलाई चिन्ता दिने काम भने गर्न नहुनेतर्फ पनि डा. स्टेनम्यान सचेत गराउँछन्।
भाइरस आँखाको बाटो हुँदै सर्ने सम्भावना कत्तिको रहन्छ भन्ने विषयमा यो अध्ययनको निष्कर्षले रोचक प्रश्न उभ्याएको छ। अनुहारमा हुने लस्सेदार झिल्लीका कारण आँखा, नाक र मुखबाट भाइरस वा अन्य विकार शरीरभित्र प्रवेश गर्न सक्छन् भन्ने तथ्य निकैअघि प्रमाणित हो। तर, कोरोना भाइरसका मामिलामा भने संक्रमणका निम्ति नाक नै सबभन्दा अनुकूल विन्दु देखिएको छ।
त्यसमा आँखा रातो देखिनु, धेरै मिच्नुदेखि लिएर सेतो भाग राताम्मे देखिनुजस्ता लक्षण थियो। त्यसैगरी राता आँखा, चिलाइरहने, आँसु झरिरहने, धमिलो देखिनेदेखि लिएर कसिंगर परेजस्तो (घोचिरहने) लक्षण त्यतिबेला कोरोना बिरामीले देखाएका थिए। (द न्यूयोर्क टाइम्सका लागि तारा पार्कर पोपले लेखको स्टोरी हामीले भावानुवाद गरेका हौं)